धनी बन्ने इच्छा छ ? ध’र्मशास्त्र भन्छ जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी १० ग’ल्ती – Namaste Host
March 5, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on धनी बन्ने इच्छा छ ? ध’र्मशास्त्र भन्छ जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी १० ग’ल्ती
९. सोमबारको दिन पी’पलको पु’जा न’गर्नुहोस् । यो दिन पी’पलको पु’जा ग’र्दा घरमा अ’लक्ष्मिको प्रवे’श हुने वि’श्वास छ ।१०. परिवारमा बहिनी र छोरीलाई अ’पशब्द प्रयोग न’गर्नुहोस् । धन सम्बन्धी काम शुक्रबार गर्नु शु’भ रहने जनाइएको छ।